Microsoft Inosunungura Yekutanga Kuongorora kweSQL Server yeGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kubva nezuro uye kwemazuva akati wandei, Microsoft irikuburitsa ratidziro yayo yekutanga yeSQL Server yeGNU / Linux muzvikamu zvakasiyana zviripo. Yekutanga yavo yaive Ubuntu, iyo yainoshanda nayo padhuze asi panguva ino vamwe vakaita saRed Hat Linux kana Fedora vatove neshanduro yavo.
Iri idanho rinotungamira mukuunza izvo zveMicrosoft zvekushandisa uye masevhisi kune iyo nyika yeiyo penguin. A) Hongu, SQL Server yaive pamwechete ne .Net matekinoroji akagadzira matambudziko mazhinji kune vashandisi vaida kuchinjira kuGnu / Linux.
SQL Server dhatabhesi server, imwe yeakanyanya kukosha uye anonakidza Microsoft matekinoroji. Yayo yemahara namesake ndeye MySQL kana MaraSQL uye pakati pezvimwe zvinhu iri kutarisira iyo fambisa zvinoshandiswa seMicrosoft Access kana Microsoft Azure, Pasina kukanganwa kuti Microsoft webhu matekinoroji uye maapplication avo anoda SQL Server.
SQL Server inosvika zvishoma nezvishoma kune yakanyanya Gnu / Linux kugoverwa
Kuuya kweSQL Server kuchabvumidza Gnu / linux kumhanyisa maapplication anenge natively pasina kushandisa emulators kana chero zvakafanana. Kunyangwe kune izvi isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei. Kwechinguva Isu tinongova nekutarisa, ndokuti, vhezheni yekuvandudza, saka hazvizoshandise kune ekupedzisira kunyorera zvakadaro kunyangwe paine pachave neanopenga mugadziri atove achizviita. Chero zvazvingaitika, kana kugovera kwako kusati kwagamuchira iyi SQL Server yekutarisa kana isingatarisirwe, unogona kutora kodhi uye mafaera kubva pane izvi link.
Kana iyo nhau yekusvika kwe Microsoft kuLinux Foundation yagadzira mhirizhonga, ndinofunga kuburitswa uku kwakanyanya kukosha nekuti SQL Server yagara iri chipingamupinyi kune vazhinji pavanotamira kuGnu / LinuxZvimwe zvemitambo yemavhidhiyo, kunyorera bhizinesi kana kungoongorora webhu. Zvinotaridza kuti ichi hachizove dambudziko ikozvino, asi zvadaro, Ndiani achakunda nemubatanidzwa uyu, Microsoft kana Gnu / Linux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Microsoft inoburitsa preview yekutanga yeSQL Server yeGnu / Linux
Ngavachiitewo ivo naM.Office, hazvisi kuti LibreOffice haina kushata asi nazvo zvinogona kuita kuti zvinyorwa zvakagadzirwa zvinakidze
Chii chinonzi MaraSQL? Ndokumbira utarise kana mazwi.
Unogona kunge uchinongedzera kuna MariaDB, forogo yeMySQL.
Chichava chikwata SQL ???
Izvo zvakange zvabata pfungwa yangu kuti MariaDB haina kuoneka, sezviri pachena vaive ivo i.
Sekutaura kwa "chileanHDU", ivo vaida kureva MariaDB.
uchitova ne office365, inoshanda zvakakwana pa linux